कोरोनालाई परास्त गर्ने भए डा. रवीन्द्र पाण्डेले दिएका यी टिप्सहरु अनिवार्य पालना गरौँ !
लकडाउन यसरी छोंटो र परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ, यसपटकको प्रजाति निकै संक्रामक र घातक छ, एक जनाले पनि नजरअन्दाज नगरौं ।
लकडाउन यसरी छोंटो र परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ – डा. रवीन्द्र पाण्डे
कोरोना महामारी नियन्त्रण बाहिर जाँदै छ । महामारीको कुन स्तरमा छ भन्नको लागि देशका अस्पताल हेर्ने हो भने थाहा हुन्छ । आम नागरिकले बेड, अक्सिजन, आइसीयु तथा रेमडेसेभिर लगायतका औषधि पाउन मुस्किल भएको छ ।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहरलाई गतसालको जस्तो कमजोर ठान्नु मुर्खता हुनेछ । हामीले गल्तीमाथि गल्तिको चांग थप्दै नगएको भए यो अवस्था आउने थिएन ।
हरेक समस्याको समाधान हुन्छ । समाधान रुखबाट झर्दैन । यसको लागि मनैदेखि लाग्नुपर्दछ । सरकार तथा हामी नागरिकले युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, भारत लगायतका मुलुकमा दोस्रो लहर आउँदा नेपालमा पनि आउँछ भन्ने कुरा बुझ नपचाएको भए जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गराउने / गर्ने गर्थ्यौं ।
१ बर्षको अन्तरालमा हामी भुटान, भियतनाम, कम्बोडिया लगायतका देशमा जस्तै दैनिक गतिबिधि गर्न सक्थ्यौं । नेपालमा यो अवस्था आउनुको प्रमुख कारण आम नागरिकको लापरबाही र सरकारको मापदण्ड पालना गराउन गृह मन्त्रालयलाई सक्रिय नगर्नुको कारण हो । सबैले राजनीति खाने, राजनीति सुत्ने अनि राजनीतिका गफ गर्ने देश संसारमा हाम्रो मात्रै होला ।
अब हामीसंग बिकल्प साँघुरा हुँदैछन् । आम नागरिकको जीवनभन्दा ठूलो केहि हुँदैन । त्यो पर्नेलाई थाहा हुन्छ । १५ दिन पहिले गर्नुपर्ने लकडाउन अब हुँदैछ । गतसालको जस्तो कर्मकाण्डी लकडाउन गर्ने हो भने यसको कुनै अर्थ छैन ।
लकडाउन गर्नु परे उल्लेखित मोडेलमा गरौँ अन्यथा भारतका धनाढ्यले जहाज चार्टर गरेर विदेश भागेझैं गाउँतिर लागौं ।
१. २-३ दिनको समय दिएर आफ्नो घर जाने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।
२. लकडाउन केवल ३ हप्ता गर्नुपर्छ । २० दिन पनि हैन, २२ दिन पनि हैन । ३ हप्ता भित्री बस्ती, गल्ली, चोक, बजार सबैतिर ब्यापक प्रहरी परिचालन गर्ने, माइकिंग गर्ने, पर्चा छर्ने, लापरबाही गर्नेलाई जरिवाना गर्ने काम ब्यापक गर्नुपर्दछ ।
३. त्यो ३ हप्ताको नेतृत्व गृह मन्त्रालयले लिनुपर्दछ ।
४. स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३ हप्तामा परीक्षणको दायरा ब्यापक रुपमा फराकिलो गर्ने, अक्सिजन प्लान्ट थप्ने, मर्मत गर्ने, अक्सिजन सिलिन्डरको स्टक कायम राख्ने, अस्पतालका कोभिड बेड बढाउने, आइसीयु थप्ने, अक्सिजन बेड थप्ने, आइसीयु तथा भेन्टिलेटर अपरेट गर्न स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकलाई तालिम दिने, अत्यावश्यक औषधि स्टक राख्ने, महामारी कम भएका जिल्लाका उपकरण तथा जनशक्ति महामारी बढी भएका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, आइसोलेसन केन्द्र थप्ने लगायतका काम गर्नुपर्दछ ।
५. सुचना तथा संचार र शिक्षा मन्त्रालयले जनाचेताको लागि कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण / प्रकाशन गर्ने ।
६. परराष्ट्र मन्त्रालयले खोपको लागि चीन, रुस, कोभ्याक्ससंग कुटनैतिक पहल गर्ने तथा भारत लगायत देशमा फसेका नेपालीको उपचार र उद्दारको लागि पहल गर्ने गर्नुपर्दछ ।
९. सिमानाका पूर्ण रुपमा शिल गर्नुपर्दछ ।
१०. आम नागरिकले सरकारले जारी गरेका निर्देशन पालना गर्ने, लकडाउनको समयमा घरभित्र बस्ने, सामान किन्न निस्कँदा अनिबार्य रुपमा सहि तरिकाले मास्क लगाउने, भीडभाड नगर्ने गर्नुपर्दछ ।
११. सामाजिक संस्था, टोल सुधार समिति, क्लब, वडा आदिले आफ्नो क्षेत्रमा अनुगमन र जनचेतना फैलाउने काम गर्नुपर्दछ ।
१२. यसो गरेमा ३ हप्तामा संक्रमित कि घरमै ठिक हुन्छन् , कि अस्पताल जान्छन् । तर समुदायमा संक्रमण सार्न सक्दैनन् । यो कडाइले अहिलेसम्मको संक्रमण सेटल हुन्छ । ३ हप्तापछि आवतजावत नियमन गर्ने, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गराउने, दण्ड जरिवानाको ब्यबस्था गर्ने तथा कडाइलाई कायम गर्ने गर्नुपर्दछ ।
यो पटकको लकडाउन छोंटो, कडा र परिणाममुखी बनाउन सबैले हातेमालो गरौँ । यसपटकको प्रजाति निकै संक्रामक र घातक छ । १ जनाले पनि नजरअन्दाज नगरौं ।
छिमेकी देश भारतमा संक्रमणले भयाबह स्थिति आएको छ । त्यहाँको संक्रमित र मृतकको संख्या गनेर हामी आत्तिनु हुँदैन ।
बेड प्याक भए, अक्सिजन सकिन लाग्यो, केटाकेकेटीलाई बचाउन गाह्रो पर्ने भयो, अब के होला ? कतै ब्राजिल र भारतको अवस्था हुने त होइन ?
यस्ता कुरा मनमा राखेर त्रास तथा असुरक्षा महशुष नगरौं । भाइरसको हजारौं / लाखौँ पटक म्युटेसन हुनसक्छ । यो भाइरसको स्वभाव हो । धेरै म्युटेसन हुँदैमा घातक हुन्छ भन्ने छैन ।
कोरोना भाइरस आफै हावामा उडेर हामीलाई संक्रमित गर्दैन । हामीलाई संक्रमित जनावर तथा चराले पनि सार्दैनन् । हामीलाई संक्रमण सार्ने हाम्रै आफन्त, साथीभाइ तथा सहकर्मीले नै हो । आफन्त तथा नजिकका व्यक्तिहरुसंग पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर सुरक्षित हुने हाम्रै हातमा छ ।
सहि तरिकाले मास्क लगाउने, भौतिक दुरी कायम गर्ने, भीडभाडमा नजाने, भीडभाड तथा भोजभतेर नगर्ने, बन्द कोठामा बैठक वा भेटघाट नगर्ने तथा नियमित रुपमा हातको सफाइ गर्ने बानी गर्यौं भने हामीलाई संक्रमण सर्दैन । हामी संक्रमित भएनौं भने हाम्रा परिवारजन सुरक्षित हुन्छन् । सुरक्षित भएपछि अस्पताल, बेड, आइसीयु, अक्सिजन तथा अन्य औषधिको आबश्यकता हुँदैन ।
इटली, न्युयोर्क, लन्डन, ब्राजिल, बुहान, भारत लगायतका देशमा पनि सबै संक्रमित भएका थिएनन् । संक्रमित भएका ९० % लाई अस्पतालको आवश्यकता परेको थिएन । अस्पताल भर्ना भएकामध्ये ९८ % निको भएर फर्किएका थिए । गतसाल हाम्रो देशमा पनि मृत्युदर जम्मा ०.६ % रहेको थियो । तसर्थ समाचारको कारण त्रसित नबनौं । हामी आत्तियौं भने बालबालिका तथा बृद्धबृद्धाको मनोविज्ञान कस्तो हुन्छ ? त्यो बुझौं । प्राकृतिक बिपत्ति तथा महामारीमा आत्मबल तथा मानसिक अवस्था बलियो हुनुपर्दछ । बलियो आत्मबलले सम्भावित जोखिमको योजना बनाउँछ । त्यो योजनाले हामीलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुर्याउंदैन । संक्रमण भएपनि आत्मबलको दियो बचायौं भने जोखिमलाई जित्न सक्छौं ।
हाम्रा पेशा, ब्यबसाय जीवनका साधन हुन् । जटिल परिस्थितिको आयु सकिएपछि हामीले अझै परिष्कृत ढंगले नोक्सानलाई नाफामा परिवर्तन गर्नेछौं । सुकेका जराले जटिल परिस्थिति सहेपछि हराभरा हुन्छन् । हामी प्रकृतिभन्दा भिन्न छैनौं ।
हरेक हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्ने हो भने जतिसुकै खतरा प्रजातिको भाइरस आएपनि हामीलाई संक्रमण गर्दैन । संक्रमण गर्न नपाएपछि भाइरस स्वत: निष्क्रिय हुँदै नष्ट हुन्छ ।
संक्रमणको सांग्लो तोड्न सरकारले दिएका निर्देशन हामीले पालना गर्नु जरुरी हुन्छ । सरकारले पनि जनधनको क्षति रोक्न समयानुसार कडाइ गर्नुपर्दछ । यी दुवै पक्षको संयोगले मात्र महामारी नियन्त्रण हुन्छ । सतर्क बनौं तर त्रस्त नबनौं ।
-डाक्टर पाण्डेको फेसबुकबाट